Cision Na - agbakwunye Mmetụta Marketingzụ ahịa Mmetụta na Nkwukọrịta Igwe Ha | Martech Zone
Cision Na - agbakwunye Mmetụta Mmetụta Marketingzụ ahịa na Igwe ojii Ha
Wednesday, July 26, 2017 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Douglas Karr
Otu ihe dị mkpa ị ga-ebu n'uche na ụlọ ọrụ Martech bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-aga n'ihu na ọdịiche dị n'etiti na ịkọwanye azụmahịa ha. Ikpokoro nke ị jiri afọ ole na ole gara aga nwere ike ghara ịdị adị ọzọ. Cision bụ otu n’ime ụlọ ọrụ ndị ahụ akwụghị m akwụ ụgwọ dịka m kwesiri. Ha bụrịrị onye ndu azụmaahịa na mmekọrịta ọha na eze, mana ha emeela ka ike ha gbasaa ahịa ahịa ụlọ ọrụ nke ọma.
N'ezie, ha na-adịbeghị anya mara ọkwa ọhụrụ atụmatụ na ngwaahịa nkwalite na Cision Nkwukọrịta igwe ojii, gụnyere njikọta na Google Analytics na Adobe Omniture iji tụọ ihe laghachi na mmetụta itinye ego. Mmelite a ga-ewebata Cision Data Jikọọ, ikike iji nyochaa ma nyochaa ọwa mgbasa ozi ọhụụ ọhụụ na ọhụụ abụọ Cision Influencer Graph atụmatụ: "M nwekwara ike ịmasị," na "ndị na - eme ihe na - aga n'ihu".
Cision Communications Njirimara Igwe ojii Gụnye
Nchịkọta mgbasa ozi mgbasa ozi ọtụtụ ọwa - na-enyere ndị ọrụ aka iduzi mkpọsa PR gafee ọwa, ndị na-emetụta ihe, mbipụta akụkọ, izipu email na mgbasa ozi mmekọrịta na otu dashboard mmekọrịta.
Mmekọrịta na Google Analytics na Adobe Omniture na-enyere ndị nkwukọrịta aka ijikọta mgbasa ozi na mmetụta mgbasa ozi na-arụ ọrụ na ntanetị nke ahụmịhe nke ụlọ ọrụ ha na e-commerce. Site na ịlele ihe ịga nke ọma nke mkpọsa PR site na oghere weebụ nchịkọta ngwaọrụ, ndị nkwukọrịta nwere ike igosi etu mkpọsa mgbasa ozi e nwetara na-esi enweta ego e-commerce ma ọ bụ ire ahịa na-eduga na ngwongwo ha.
The Cision Influencer Graph “M nwekwara ike Dị ka” atụmatụ na-enye ndoro-ndoro okwesiri nke dabere na ala ndi mmadu, ndi mmadu na ihe ndi ozo iji nyere aka choputa ndi mmadu na Twitter ndi puru iru ndi ahia. "Ndị na - eme ihe na - ewu ewu" na - enye ndị ọrụ ohere ịchọta ndị na - eme ihe ike ka ha na - ebili na ama maka otu isiokwu, iji ruo ha tupu ha etozu na ewu ewu.
The Cision Comms Igwe ojii ugbu a gụnyere Facebook, Instagram na Youtube ọdịnaya dị n'otu ikpo okwu dị ka mbipụta, ntanetị na mgbasa ozi, na mgbakwunye na ọdịnaya Twitter etinyelarị, na-enye ndị ọrụ ohere inyocha akụkọ zuru oke n'ofe ọwa niile dị mkpa. Enwere ike ịkekọrịta nkọwa, nkwupụta, na usoro ugbu a nke ụlọ ọrụ, ozi, ndị isi ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa.
Ntọhapụ ọhụụ nke Cision Comms Cloud na-aza abụọ nnukwu nsogbu ụlọ ọrụ: ịnyagharị nkwukọrịta site na ọtụtụ puku ndị na-eme ihe ike na ọtụtụ ọwa; na ikwu ezigbo, azụmahịa na-emetụta azụmaahịa ndị a. Nkwalite ngwaahịa nke oge a na-eme ka ndị ọkachamara nkwukọrịta ahịa nwee ike ịlụ ọgụ maka nsogbu ndị a, nwee otu ikpo okwu zuru oke ma nwee isi nchịkọta na data. Kevin Akeroyd, onye isi oche nke Cision
Tags: ihe omumunkenkecision data jikọọcision influencer eseresenkwukọrịta igwe ojiindenye ọdịnayaaro ọdịnayaGoogle Analyticsahịa ahịaòkè nke oluna-agbanwe agbanweị nwekwara ike ịmasị
Ihe Ọhụrụ Ihe Podcast: Na Onye Ọbịa Douglas Karr